सबै कुरा तपाईंलाई हावा टर्बाइनहरूको बारेमा जान्नु आवश्यक छ हरियो नवीकरणीय
वायु टर्बाइनहरूको बारेमा तपाईंलाई थाहा पाउनुपर्ने सबै कुरा
नवीकरणीय उर्जाको संसारमा, सौर र वायु उर्जा निस्सन्देह बाहिर उभिन्छ। पहिलोमा सोलर प्यानल भनिने तत्वहरू हुन्छन् जुन सूर्यको विकिरण कब्जा गर्न र यसलाई विद्युत ऊर्जामा रूपान्तरण गर्न सक्षम छ। दोस्रोले हावाको बिजुलीमा उर्जालाई परिवर्तन गर्नका लागि तथाकथित हावा टर्वाइनहरू प्रयोग गर्दछ।
हावा टर्बाइनहरू धेरै जटिल उपकरणहरू हुन् जसलाई लाभदायक र दक्ष हुनको लागि पहिलेको अध्ययनको आवश्यक पर्दछ। थप रूपमा, त्यहाँ हावा टर्वाइन र हावा शक्ति को धेरै प्रकारका छन्। के तपाइँ हावा टर्बाइन सम्बन्धी सबै कुरा जान्न चाहानुहुन्छ?
1 हावा टर्बाइनको विशेषता
3 हावा टर्बाइनका प्रकारहरू
3.1 रोटर अक्षको अनुसार
3.1.1 ठाडो अक्ष
4 तेर्सो अक्ष
4.1 आपूर्ति शक्ति अनुसार
हावा टर्बाइनको विशेषता
अगाडि उल्लेख गरिएझैं वायु टर्बाइन एक उपकरण हो जुन हावाको गतिज उर्जालाई विद्युतीय ऊर्जामा रूपान्तरण गर्न सक्षम छ। घुमाउने ब्लेडको प्रयोगमार्फत यसले गर्छ १ minute र २० पल्ट प्रति मिनेट। क्रान्तिहरू जसमा ब्लेड घुमाउन सकिन्छ धेरै कुरा निर्भर गर्दछ उनिहरूको निर्माणमा प्रयुक्त टेक्नोलोजीको प्रकार र वायुको शक्तिले जुन त्यस क्षणमा चलाउँछ। सामान्यतया, हल्का सामग्री द्वारा निर्माण गरिएका ब्लेडहरू प्रति मिनेट अधिक पटक पल्टाउन सक्षम छन्।
जसै ब्लेडले अधिक गति प्राप्त गर्दछ, अधिक मात्रामा बिजुली उर्जा उत्पादन गर्न सक्षम छ र यसैले यसको दक्षता बढी छ। हावा टर्बाइन सुरू गर्नका लागि सहायक ऊर्जा आवश्यक छ जुन आवाश्यकतालाई सुरू गर्नका लागि आपूर्ति गरिन्छ। त्यसोभए, एक पटक सुरु भएपछि, यो हावा भनेको ब्लेडहरू सार्न जिम्मेवार छ।
हावा टर्बाइनहरू छन् २ half बर्ष भन्दा बढी आधा जीवन। यद्यपि यसको स्थापना लागत र यसको अघिल्लो लगानी अधिक छ, किनकि यसले पर्याप्त लामो उपयोगी जीवन रहेको छ, यो पूर्ण रूपले परिणत हुन सक्छ र आर्थिक फाइदा लिन सक्छ, जबकि वातावरणमा पर्ने प्रभावहरूलाई कम गर्छ र जीवाश्म ईन्धनहरूले उत्पादित हरितगृह ग्यासहरूको उत्सर्जनलाई कम गर्दछ।
टेक्नोलोजी बढ्दै जाँदा, हावा टर्बाइनको विकासले यसलाई लामो उपयोगी जीवनको लागि अनुमति प्रदान गर्दछ, साथै थप विद्युतीय उर्जा उत्पादन गर्न सक्षम हुँदै र आफूलाई अधिकतम स्थानहरूमा आफूलाई पत्ता लगाउन सक्षम हुँदै।
वायु टर्बाइनलाई हावाको गतिशील उर्जालाई विद्युत ऊर्जामा रूपान्तरण गर्न सक्षम भनिन्छ। यद्यपि यो कसरी उर्जा उत्पादन गर्न सक्षम छ? हावा टर्वाइन विभिन्न चरणमा विद्युत उत्पादन गर्न सक्षम छ।
स्वचालित अभिमुखीकरण। यो पहिलो चरण हो जहाँ वायु टर्वाइन सञ्चालन गर्न सुरू हुन्छ। यो हावाले प्रदान गरेको उर्जाको पूर्ण फाइदा लिन स्वचालित रूपमा अभिविन्यास गर्न सक्षम छ। यो डेटाको लागि ज्ञात हुन्छ जुन हावा फलक र एनिमोमीटरद्वारा रेकर्ड गरिएको छ जुन तिनीहरूले उनीहरूको माथिल्लो भागमा समावेश गरेका छन्। उनीहरूसँग एउटा प्लेटफर्म छ जुन टावरको अन्त्यमा मुकुटमा घुमाउँदछ।
ब्लेड मोड। हावा ब्लेडहरु को लागी शुरू गर्दछ। यो हुनको लागि क्रममा यसको गति 3,5. m m / s को हुनु पर्छ। अधिकतम उर्जा बिजुली उत्पादनको अनुकूलनको लागि आवश्यक हुन्छ जब हावाको गति ११ m / s छ। यदि हावा gusts 11 m / s भन्दा ठूलो छ, ब्लेडहरु एक झण्डा को आकार मा राखिन्छ ताकि हावा टरबाइन ब्रेक, यसैले अत्यधिक तनावबाट जोगिन।
गुणा यो एक रोटर हो जुन एक ढिलो शाफ्टमा परिणत हुन्छ जुन प्रति मिनेट १ 13 वटा क्रान्तिहरूबाट १ minute०० सम्ममा मोड्नको गति बढाउन सक्षम छ।
जेनेरेसन। यस गुणकलाई धन्यवाद छ जसले प्रति मिनेट क्रान्तिहरू बढाउँदछ, यसको उर्जाले जेनेरेटरलाई ट्रान्सफर गर्न सक्दछ जुन उनीहरूले जोडेका छन्, यसैले बिजुली उत्पादन गर्दछ।
निकासी उत्पन्न बिजुली ऊर्जा आधार मा टावर भित्र आयोजित छ। एकचोटि त्यहाँ त्यहाँ सारिसकेपछि, यो भूमिगत रेखामा सबस्टेशनमा जान्छ जहाँ यसको भोल्टेजले इन्धनलाई इलेक्ट्रिकल नेटवर्कमा इन्जेक्सन गर्न पर्याप्त बृद्धि गर्दछ र बाँकी खपत बिन्दुहरूमा वितरण गर्दछ।
निगरानी गर्दै। बाँकी उर्जा उत्पादन चरणहरू ठीकसँग सम्पन्न गर्न, अनुगमन र निगरानी प्रक्रिया निरन्तर आवश्यक हुन्छ। वायु टर्बाइनको महत्वपूर्ण कार्यहरू अनुगमन गरिन्छन् र सबस्टेशन र नियन्त्रण केन्द्रबाट सुपरिवेक्षण गरिन्छ। यसका लागि धन्यवाद, हावा फार्मको अपरेसनमा भएको कुनै पनि घटना पत्ता लगाउन र समाधान गर्न सकिन्छ।
हावा टर्बाइनका प्रकारहरू
त्यहाँ दुई प्रकारका हावा टर्बाइनहरू उनीहरूको उपयोग र उर्जाको आधारमा हुन्छन्। पहिलेको रोटर (ठाडो वा क्षैतिज) को अक्षमा निर्भर हुन्छ र आपूर्ति गरिएको पावरमा पछिल्लो।
रोटर अक्षको अनुसार
यस प्रकारको हावा टर्बाइनको प्रमुख फाइदाहरू हुन् स्वचालित अभिमुखीकरण चरणको आवश्यक पर्दैन ओम्नी दिशात्मक छ। थप रूपमा, यसका कम्पोनेन्टहरू जस्तै जेनरेटर र गुणक जमीनमा फ्लश स्थापना हुन्छन् जसले मर्मतसम्भारको स्थितिमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउँदछ र सम्मेलन लागतमा कटौती हुन्छ।
नाकाबन्दीमा हामी फेला पार्दछौं कि ती छन अन्य प्रकारको तुलनामा कम क्षमता र यसको बाह्य प्रणालीहरूको लागि आवश्यकता छ जुन ब्लेडहरूको लागि स्टार्टरको रूपमा कार्य गर्दछ। थप रूपमा, जब रोटरलाई मर्मतका लागि विच्छेदन गर्न आवश्यक हुन्छ, वायु टर्बाइनको सबै मेशिनरी बिच्छेदन गर्नुपर्दछ।
धेरै जसो हावा टर्बाइनहरू तिनीहरूलाई बिजुली नेटवर्कमा जडान गर्न निर्माण गरिएको हो तीन ब्लेड र तेर्सो अक्षको साथ। यी हावा टर्वाइनहरू छन् अधिक क्षमता र प्रति मिनेट उच्च रोटेशनल गति प्राप्त गर्नुहोस्। यसको मतलव तपाईलाई कम गुणन चाहिन्छ। थप रूपमा, यसको उच्च निर्माणको लागि धन्यवाद, यो उचाइमा बतासको बलको राम्रो फाइदा लिन सक्षम छ।
आपूर्ति शक्ति अनुसार
तिनीहरूले आपूर्ति गर्ने शक्तिमा निर्भर गर्दै, त्यहाँ धेरै प्रकारका हावा टर्बाइनहरू छन्। पहिलो कम शक्ति उपकरणहरू छन्। तिनीहरू मेकानिकल उर्जाको प्रयोगसँग सम्बन्धित छन्, जस्तै पम्पि water पानीको लागि, र तिनीहरू K० किलोवाट बिजुली प्रदान गर्न सक्षम छन्। केहि प्रकारका उपकरणहरू पूर्ण आपूर्ति बढाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ। आज तिनीहरू मेकानिकल प्रणाली वा पृथक बिजुली आपूर्तिका लागि एक शक्ति स्रोतको रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
मध्यम उर्जा उपकरण। यी सेकेन्डहरू छन् र तिनीहरू भित्र छन् लगभग १K० किलोवाटको उत्पादन दायरा। तिनीहरू सामान्यतया ब्याट्रीसँग जोडिएका हुँदैनन्, तर विद्युत नेटवर्कमा छन्।
अन्तमा, उच्च-उर्जा उपकरणहरू व्यावसायिक बिजुली ऊर्जा उत्पादनको लागि प्रयोग गरिन्छ र ग्रिडमा र समूहहरूमा जडान हुन्छ। यसको उत्पादन गीगावाटमा पुग्छ।
यस जानकारीको साथ तपाईं हावा टर्बाइनहरू र उनीहरूको अपरेशनको बारेमा बढी सिक्न सक्नुहुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: हरियो नवीकरणीय » नवीकरणीय ऊर्जा » वायु शक्ति » वायु टर्बाइनहरूको बारेमा तपाईंलाई थाहा पाउनुपर्ने सबै कुरा
कसरी घर बनाउने बायोडीजेल बनाउन